openSUSE Tumbleweed vonona ny hisintona Rolling Release | Avy amin'ny Linux
openSUSE Tumbleweed vonona ny hisintona ny Rolling Release !!!
Efa nivoaka ilay vaovao OpenSUSE 13.2, fa tsy izay ihany no vaovao momba an'i SUSE. Miaraka amin'ity fanombohana ity, ny vaovao Famotsorana Rolling avy amin'ny antso openSUSE ny tadio ireo ary ny Factory dia hitohy ho distro ho an'ny fampandrosoana openSUSE mitohy.
Avy aiza aho no misintona openSUSE Tumbleweed?
Avy amin'ny rohy avelantsika eto ambany:
Sintomy ny openSUSE Tumbleweed
Amin'izao fotoana izao ny sary ho an'ny Factory dia mitohy miseho amin'ny rohy nomena, fa afaka andro vitsivitsy dia ho hita eo ambanin'ny anarana hoe Tumbleweed. Marihina fa izay mampiasa Factory dia afaka mankany ny tadio ireo tsy mametraka indray. Raha vao apetraka dia tsy maintsy manova ireo tahiry ianao (raha vao mipoitra ireo isos vaovao dia tsy ilaina intsony izany).
Sokafy ny terminal ary mihazakazaha faka:
Manavao ny distro izahay:
Ary vonona :). Izy ireo dia efa manana ny Tuckweed.
Fampahalalana bebe kokoa: http://en.opensuse.org/Portal:Tumbleweed
Azontsika atao koa ny manampy ny fonosana Packman raha vao nohavaozina ny fizarana (atoro anao):
ary manavao ny zava-drehetra amin'ny:
zypper up zypper install-vaovao-mamporisika ny zypper dup
Fiarahabana avy amin'ny linuxeros :).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » openSUSE Tumbleweed vonona ny hisintona ny Rolling Release !!!
Izay rehetra nolazainao momba ny "tsiro" samihafa an'ny OpenSUSE dia marina hatramin'ny vao haingana. Tubleweed sy Factory dia izao ihany. Tsy haiko raha manondro Factory na ny mifanohitra amin'izay ny repositories an'ny Tubleweed.
Ny fampiarahana ireo sampana roa ireo dia fanapahan-kevitra noraisin'ny ekipa SUSE tsy ela akory izay.
Eny, saingy navadik'izy ireo izany hatramin'ny nahafantarana ny anarana Tubleweed. Ny tetikasa Tubleweed dia namboarina indray satria nitranga iray volana sy tapany lasa izay niaraka tamin'i Factory ary tamin'ny 4.11.2014 dia nisy repo Tubleweed vaovao miaraka iso izay nipoitra. Tsy repo intsony toy ny teo aloha intsony. Ny ozinina dia ho an'ny fampandrosoana manta ihany ka tsy hampiorina azy. Vaovao 2 andro izao.
Fampahalalana bebe kokoa: http://es.opensuse.org/Portal:Tumbleweed
David Pineda dia hoy izy:
Salama namana, fantatrao fa manana fanontaniana aho, avy amin'izay novakiako, ny kininin'ny orinasa openuse dia ho azo antoka ny famotsorana azy ary ho very izy ireo satria hitovy amin'ny ozinina openuse ...
Inona ny fahasamihafana misy ankehitriny eo amin'ny orinasa sy ny tumbleweed?
Valiny tamin'i David Pineda
Salama @ David Pineda,
Hatramin'ny 4 Novambra no tubleweed ihany no miala amin'ny openSUSE. Ny orinasa dia natao ho an'ny fampandrosoana mavitrika ny distro ka tsy miorina amin'ny fampiasana isan'andro.
Hatramin'ny 4 Novambra, nitambatra tamin'ny Rolling Factory i Tubleweed Rolling, tsy nisy afa-tsy Rolling Tubleweed ary tsy nisy Rolling Factory.
Napetrak'izy ireo tao amin'ny fanambarana ofisialy.
»Tamin'ny 2014 Novambra XNUMX, ny kininina Factory Rolling and Tumbleweed RollSUSE dia natambatra ho antso iray misokatra OpenSUSE Tumbleweed Rolling.»
“Izay mampiasa openSUSE Factory sy openSUSE Tumbleweed alohan'ny 2015 Mey 2015 dia tokony hanaraka ny torolalana amin'ity pejy ity. Tsy maintsy manao izany ireo mpampiasa diso tafahoatra mba hanohy handray vaovao farany. Ny mpampiasa ny orinasa dia manana hatramin'ny XNUMX Mey XNUMX hanaovana izany. "
Fampahalalana bebe kokoa: https://en.opensuse.org/SDB:Tumbleweed_Merger
Misaotra an'i Petercheco. Ny famakiana ny hevitrao dia nampiseho mazava izany rehetra izany.
Ankehitriny ny Tumbleweed dia ilay fanadinana natao ho an'ny daholobe. Saingy, Tumbleweed dia mbola ampahany amin'ny tetikasan'ny Factory, izany hoe, mbola kinova tsy miova tanteraka izany, ka hahita hadisoana vitsivitsy ianao. Ny tetik'asa Factory avy eo dia mandrakotra: Tumbleweed, Factory-to-test, openqa ary ireo tetikasa misaraka rehetra izay mivelatra ny OpenSUSE, ankoatry ny zavatra hafa.
Nohazavain'i Jos Poortvliet sy Richard Brown taminao tsara izany: D.
Nifindra tany amin'ny trano fitehirizana Tumbleweed aho araka ny torolàlana omena eto ary toa nilamina izany, ao anatin'izany ireo mpamily ho an'ny sary Nvidia taloha. Ny fanontaniako dia raha azoko ampiana ireo repositories izay nananako teo aloha. Heveriko fa ny zavatra sarotra indrindra takarina ao amin'ny SUSE dia ny olan'ny repositories sy ny laharam-pahamehany. Ankehitriny raha resaka fametrahana zavatra no jerena dia toa repository iraisana izy io izay anaovana ny fisintomana: "Open SUSE-20141102". Miasa ho ahy ny zava-drehetra ankoatry ny Audacious, noho izany dia mikasa ny hamela azy aho. Ny marina dia ho an'ny zazavavikely dia tena tsy misy dikany izany rehetra izany, saingy heveriko fa ho an'ny solosainako ny zavatra tsara indrindra dia ny fananana Rolling Release ary ho hitantsika ny fomba fitondrany amin'ny ho avy.
Misaotra noho ny fandraisan'anjaran'i Peter sy ny arahaba indrindra
Salama, miaraka amin'ny repo an'ny antoko fahatelo, azonao antoka ny mametaka azy ireo satria matetika izy ireo dia manana ny sampana Tumbleweed na Factory. Amin'ny ankapobeny, mila mitady ny rindrambaiko.opensuse.com fotsiny ianao amin'ny fonosana ilainao ary hiseho ilay repo ampiana.
Tumbweed = Manakodia
Factory = Tena ahodina?
Tumbweed = Fitsapana
Factory = Sid
(raha izany dia mazava sahady)
Misaotra anao nanazava ahy tamin'ny fahendrenao.
Ny tena marina, ny "hananana (sic) eny (sic) mazava tsara sahady" dia betsaka kokoa.
Ny Factory dia tetikasa iray fa tsy famoahana tahaka izany. Tumbweed. ankehitriny, miditra amin'ilay antsoina hoe Factory izy io, io ilay kinova Factory azon'ny rehetra ampiasaina, satria efa nandalo fitsapana maro izy. Alohan'ny Tumbleweed dia misy Factory-to-test ary alohan'ny tetikasa samihafa. Ka ireo tetik'asa ireo, rehefa nilamina tsara, dia niara-namorona Factory-To-Test, izay taorian'ilay fitsapana natao tamin'ny OpenQA dia lasa Tumbleweed. Raha ny marina dia somary sarotra kokoa noho io, saingy nohazavaina tsara tamin'ny pejy OpenSUSE
Chamaeleonidae dia hoy izy:
Ary tsy maintsy nesoriko ny Factory ary nametraka an'i Manjaro satria ny systemd dia nameno ny mari-panaiko .. Misy fomba ve hanesorana tanteraka ny openSUSE ilay systemd maharikoriko ary hametraka openRC sa zavatra hafa?
Valiny tamin'i Chamaeleonidae
Manjaro mampiasa systemd…
Fa farafaharatsiny azonao esorina izy ary apetraka openRC oo
Manaraka ny mpitari-dalana anao, izao dia miasa OK ny OpenSUSE 13.2, ary amin'ny hafainganam-pandehan'ny afo, miaraka amin'ireo trano fitahirizana Tumbleweed.
Manavao ny fomba voalaza eto aho eo am-piandrasana ireo tahiry farany.
Na izany aza, ao amin'ny Yast> Software repositories, miseho izao repository manaraka izao:
Azonao atao ve ny manazava hoe inona io karazana tahiry io ary raha toa ka mitahiry vonjimaika sy mandalo izy io?
Misaotra tamin'ny vaovao sy ny arahaba
Eny, ity no tahiry ho an'ny sampan'ny Tumbleweed ankehitriny ... Napetrak'izy ireo tamin'ny daty namoahana azy tamin'ny sary farany :).
opensuse Tumbleweed 4 volana aorian'ny famoahana ny kinova feno
bug, fianjerana ary fianjerana manamboatra fanavaozana
fanarenana tsy filaminana
Fanamboarana ny fanjifana ram
fanamboarana ho an'ny hardware, rindrambaiko, ary ny tsy fitovian'ny programa
openSUSE 13.2 misy + torolàlana fametrahana aorian'ny fametrahana !!!
Mikaroha hafatra ao amin'ny kaonty Gmail